Madaxweyne Ku Xigeenka Khaatumo oo sheegay in ay ku taageersanyihiin Puntland soo celinta gobolka Sool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Ku Xigeenka Khaatumo oo sheegay in ay ku taageersanyihiin Puntland soo celinta gobolka Sool
May 21, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka Khaatumo ayaa sheegay in ay ku taageersanyihiin Puntland soo celinta gobolka Sool.
Cabdule Maxamuud Cagalule oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Garoowe maanta oo Isniin ah ayaa sheegay in ay Puntland ku taageerayaan soo celinta gobolka Sool.
“Xaqiiqdii, waxay ku khasbantahay Puntland in ay ka qaado tilaabo kuna dagaalanto waa wajib sababtoo ah gobolka Sool waxaa laga qabsaday Puntland, Khaatumo markaas ma jirin, Puntland baa laga qabsaday, masuuliyad baana ka saaran,” ayuu yiri Madaxweyne Ku Xigeenka Khaatumo Cagalule.
“Waxaanu ku garab taaganahay af iyo adin-ba Puntland sidii goboladaas loo xoreyn lahaa,” ayuu ku sii daray.
Waxa uu sheegay in Cali Khaliif Galeyr uusan hadda Khaatumo ka aheyn Madaxweyne isagoo sheegay in uu jabiyay dhammaan dastuurkii iyo nidaamkii ay lahayd Khaatumo.
“Dhammaanba dastuurkii iyo nidaamkii ay lahayd maamul goboleedka Khaatumo ee loo dhaarshay Cali Khaliif Galeyr waa uu jabiyay, “ waxa uu intaas ku daray “kuma aanu jirin dastuurkayaga in lagu biiro kuwa ku soo duulay deegaanadayada.”
July 20, 2018 Maleeshiyada Al-Shabaab oo la wareegtay magaalada Af Urur